Cosmic kristaly | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Raha toa ianao ka tia ny firavaka sy vatosoa sarobidy, Cosmic kristaly dia ny slot lalao ho anao. izany slots toerana tombony maimaim-poana lalao dia manana dimy reels sy dimam-polo lehibe Bet-tsipika. Izany mahatonga lalana ho maro ny fandresena tsikombakomba dia afaka mandray soa avy. Ny foto-kevitry Mifototra amin'ny kristaly maro loko isan-karazany avy any amin'ny tontolo cosmic. Ny resahana ny reels dia scintillating fahitana ny toerana amin'ny mavokely sy volomparasy accents izay toa somary mahagaga. Azonao atao ihany koa ny kintana mamirapiratra no fahitana izany Mariho nafana sy zavona karazana fitsanganana amin'ny planeta. Ny fototra mozika dia ny Spa natiora ary mahatsapa toy ny fisaintsainana ny ny feon'ny. Ny famaritana avo sary mahatonga anao mahazo Andevozin'ny ny lalao avy hatrany. Ary maro ireo endri-javatra mba hanampiana anao handresy be koa. Ny hilokana dia manomboka amin'ny 50p ny kofehy ireny ary afaka hanangana azy ho amin'ny ambony indrindra ny £ 100.
Momba ny developer ny Cosmic kristaly
Izany mahafinaritra sy mahagaga slots toerana tombony maimaim-poana lalao dia novokarin'ny Iron Dog (NYX), anarana fanta-daza iray marika ho an'ny aterineto Casino slots. Izy ireo no ekipa fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny fahaiza-manao isan-karazany mampiasa lalao mandroso izay mamorona ny tsara indrindra slot lalao traikefa ho an'ny mpilalao an-tserasera.
Ao amin'io maro loko slots toerana tombony maimaim-poana dia afaka mahazo marika isan-karazany sy ny sarimiaina amin'ny mandresy. Misy mavokely kristaly, volomparasy olona, manga kristaly, mavo sy maitso kristaly toy ny fototra fanehoana an'ohatra ny slot. Kristaly mamirapiratra marika mavo dia ny olona izay afaka mandoa anao an-tampony valisoa hatramin'ny 1000 fotoana ny tsatòka. Izany no azo atao raha mitantana-tanety dimy ireo tamin'ny mavitrika Bet-làlana. Ace ny alalan 'ny 10 ny milalao karatra lasa mandoa ny ambany sokajy eto. Misy lafin-javatra roa tombony izay mampandeha mariky ny mena-mavo krystaly sy re-kofehy ireny mariky.
Wild Bonus: Ny mavo-mena marika dia ny bibidia endri-javatra io slots toerana tombony maimaim-poana lalao. Izany manolo ny marika rehetra sy ny tsirairay ary ny fipetrahana mampivelatra ny handrakotra ny miraingiraingy azon'ny. Noho izany endri-javatra izany dia manampy anao handresy ireo valisoa lehibe kokoa amin'ny alalan'ny fandresena tsikombakomba.
Free Spins: Tsy misy voatondro isan'ny spins maimaim-poana ao amin'io lalao. Fa isaky ny tsy hahazo mandresy mitambatra, Re-kofehy ireny ny endri-javatra dia niteraka. Midika izany foana ny reels kofehy mandra-pahatongan'ny fotoana mandresy avy amin'ny mitambatra. ankapobeny, ianao hatao antoka fandresena isaky wagering ny spins.
Amin'ny sary mahavariana tsy manam-paharoa sy ny foto-kevitra, izany slots toerana tombony maimaim-poana lalao no tsara indrindra ao amin'ny sokajy. Ny fiverenana ho any amin'ny mpilalao eto 95.01%.